အေးဂျင့်များအတွက် IBET789 အေးဂျင့် အသုံးပြုနည်း - IBET789 မြန်မာ
IBET789 ကိုယ်စားလှယ် နမူနာ
မင်္ဂလာပါ IBET789 မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်များ!
ဤ IBET789 နမူနာသည် စာနှင့်ပုံတစ်ကွ ဖော်ပြထားပြီး သင်ဟာ ကိုယ်စားလှယ်အသစ် ဖြစ်နေစေကာမူ လွယ်ကူစွာ သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အချက် (၆)ချက် ရှိပြီး ကျွနု်ပ်တို့ တတ်နိုင်သမျှ အရိုးရှင်းဆုံး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ –
● ၁။ IBET789 ကိုယ်စားလှယ် စီမံခန့်ခွဲရာသို့ ဝင်ရောက်နည်း
● ၂။ IBET789 မှ ငွေသားစာရင်း စစ်ဆေးနည်း
● ၃။ IBET789 ကိုယ်စားလှယ်အကောင့်ကို Password ပြောင်းနည်း
● ၄။ IBET789 မန်ဘာအကောင့်ဖွင့်နည်း
● ၅။ မန်ဘာများကို အမှတ်ထည့်ပေးနည်း
● ၆။ မန်ဘာများကို အမှတ် နုတ်ပေးနည်း
ကိုယ်စားလှယ် ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သတ်၍ သင့်ထံတွင် အခြားအခက်အခဲ / မေးခွန်းများ ရှိပါက ဤနံပါတ်များဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်
ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ 0988 55555 01 အောက်ပါ IBET789 ကိုယ်စားလှယ် link ကိုဝင်ရောက်ပြီး သင့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခရီးကို ယခုပဲ
စာရင်းမသွင်း ရသေဘူးလား? ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ယခုပဲ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။
IBET789 ကိုယ်စားလှယ် LINK
၁။ IBET789 ကိုယ်စားလှယ် စီမံခန့်ခွဲရာသို့ ဝင်ရောက်နည်း
● အဆင့် (၁) – သင့်ရဲ့ IBET789 အကောင့်အမည်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် ရိုက်ထည့်ပါ
● အဆင့် (၂) – “ Login” ကို နှိပ်ပါ
● Login လုပ်ခြင်း အောင်မြင်ပါက အညွှန်းစာမျက်နှာတစ်ခု၊ သင့်အကောင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
၂။ IBET789 မှ ငွေသားစာရင်း စစ်ဆေးနည်း
● အဆင့် (၁) – “ Account” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၂) – “ My Profile” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၃) – “ Cash Balance” ကို ရှာလိုက်ပါ
● ဤ “ Cash Balance” သည် သင့်တွင် ကျန်ရှိသော အမှတ် ပမာဏဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့အောက်ရှိ မန်ဘာများကို အမှတ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
● ဥပမာ – ပုံထဲတွင် ကျွနု်ပ်ထံတွင် လက်ကျန်ပမာဏ (၁၀,၀၀၀) ယူနစ်ရှိပြီး ကျွနု်ပ် မန်ဘာများကို ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
● သင့်ထံတွင် လက်ကျန်ငွေ မရှိတော့ပါက ကျွနု်ပ်တို့၏ (၂၄)နာရီ ဝန်ဆောင်မှုအသင်းထံ ဆက်သွယ်ပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
● (၁)ယူတစ် သည် မြန်မာငွေ (၁,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ညီမျှပါသည်။
၃။ IBET789 ကိုယ်စားလှယ်အကောင့်ကို Password ပြောင်းနည်း
● အဆင့် (၂) – “ Change Password” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၃) – သင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ် အဟောင်းကို ရိုက်ပါ။ ထို့နောက် လျှို့ဝှက်နံပါတ် အသစ်ရိုက်ထည့်ပါ။ လျှို့ဝှက်နံပါတ် အသစ်ကို အတည်ပြုပါ။
● အဆင့် (၄) – “ Save” ကို နှိပ်ပါ
● လျှို့ဝှက်နံပါတ်သည် အနည်းဆုံး စာလုံးရေ (၆)လုံး ရှိရမည်
၄။ IBET789 မန်ဘာအကောင့်ဖွင့်နည်း
● အဆင့် (၁) – “ Member Management” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၂) – “ Member” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၃) – “ New Member” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၄) – သင့်မန်ဘာအတွက် အသုံးပြုအမည်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ
● အဆင့် (၅) – သင့်မန်ဘာအတွက် လောင်းကစားကန့်သတ်ချက်ကို ချိန်ညှိပေးပါ
● အဆင့် (၆) – သင့်မန်ဘာအတွက် ကော်မရှင်နှုန်းထားကို ချိန်ညှိပေးပါ
● အဆင့် (၇) – “ Save” နှိပ်ပါ
● မန်ဘာအသုံးပြုအမည်ကို သိမ်းဆည်းပြီးပါက ပြန်ပြောင်းမရပါ
● အခြားပြင်ဆင်ချက်များဖြစ်သော လျှို့ဝှက်နံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် ကော်မရှင်တို့ကိုတော့ အချိန်မရွေး ပြန်ပြောင်းနိုင်ပါသည်
၅။ မန်ဘာများကို အမှတ်ထည့်ပေးနည်း
● အဆင့် (၁) – “ Payment” ကိုနှိပ်ပါ
● အဆင့် (၂) – “ Quick Pay” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၃) – သင့်အမှတ်ဖြည့်ပေးမည့် မန်ဘာ၏ ဘေးရှိ ပမဏ ကိုရှာပါ
● အဆင့် (၄) – သင်ဖြည့်ပေးလိုသည့် ယူနစ်ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ
● အဆင့် (၅) – “ Pay” ကို နှိပ်ပါ
● အမှတ်ဖြည့်ခြင်း အောင်မြင်ပါက သင့်မန်ဘာ၏ ကျန်ရှိနေသော ပမာဏကို “ Current Balance” တွင် တွေ့ရပါမည်
● ဥပမာ – ကျွန်ုပ်၏ မန်ဘာအကောင့်တွင် အမှတ်မရှိသဖြင့် အမှတ် (၁,၀၀၀)ယူနစ် ဖြည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီး နောက်ဆုံးပုံတွင် အမှတ် (၁,၀၀၀)ယူနစ်ကို
“ Current Balance” တွင် တွေ့ရပါမည်
● သင်အမှတ်ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်သော ပမာဏသည် သင်၏ IBET789 ကိုယ်စားလှယ်အကောင့်၏ ငွေသားပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်
၆။ မန်ဘာများကို အမှတ် နုတ်ပေးနည်း
● အဆင့် (၂) – “ Payment” ကိုနှိပ်ပါ
● အဆင့် (၃) – “ Quick Pay” ကို နှိပ်ပါ
● အဆင့် (၄) – သင့်အမှတ်နုတ်ပေးမည့် မန်ဘာ၏ ဘေးရှိ ပမဏ ကိုရှာပါ
● အဆင့် (၅) – သင်နုတ်ပေးလိုသည့် ယူနစ်ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ
● အဆင့် (၆) – “ Pay” ကို နှိပ်ပါ
● ဥပမာ – ကျွန်ုပ်၏ မန်ဘာအကောင့်တွင် အမှတ် (၃,၀၀၀)ယူနစ်ရှိသဖြင့် အမှတ် (၂,၅၀၀)ယူနစ်နုတ်ပေးလိုက်ပြီး နောက်ဆုံးပုံတွင် အမှတ် (၅၀၀)ယူနစ်ကို
● သင်နုတ်ပေးလိုက်သော အမှတ်ပမာဏသည် သင်၏ IBET789 ကိုယ်စားလှယ်အကောင့်ထဲသို့ ထည့်ပေါင်းပေးသွားပါမည်